ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: မလေးရှား ရွှေလူငယ် အဖွဲ့ဝင်များအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် အထူးဝန်ဆောင်မှု့
မလေးရှား ရွှေလူငယ် အဖွဲ့ဝင်များအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် အထူးဝန်ဆောင်မှု့
ယခုတစ်ပတ် အထူးအထုး အထူး ပရိုမိုးရှင်း လက်မှတ်ဈေးများကို မလေးရှား ၊ ထိုင်း ၊ မြန်မာ တို့တွင်နေထိုင်သောမြန်မာအားလုံးသိရှိအောင် ကြော်ငြာပြီး ယနေ့မှစတင်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည် ။
အထူးဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်တာကြောင့် သေချာဖတ်ရှု့ပြီး မိမိသူငယ်ချင်းများကိုလည်း အကြောင်းကြားပေးဖို့ရွှေလူငယ်မှလေးစားစွာ အသိပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ ။ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားနော်...
KUL- YGN - KUl (မလေးရှား-ရန်ကုန်-မလေးရှား)
1.6.2013 မှ 30.6.2013 ကြား(ဇွန်လတစ်လလုံး)
တစ်ကြောင်းတည်း - 177.00 RM(လက်ဆွဲ ၇ ကီလိုပါ)
သွားပြန် 352.00 RM(လက်ဆွဲ ၇ ကီလိုစီပါ)
1.7.2013 မှ 31.7.2013 ကြား (ဇုလိုင်လတစ်လလုံး)
တစ်ကြောင်းတည်း - 97.00 RM (လက်ဆွဲ ၇ ကီလိုပါ)
သွားပြန် 182.00 RM (လက်ဆွဲ ၇ ကီလိုစီပါ)
1.8.2013 မှ 31.12.2013 ကြား (2013 နှစ်ကုန်အထိ)
တစ်ကြောင်းတည်း - 70.00 RM (လက်ဆွဲ ၇ ကီလိုပါ)
သွားပြန် 140.00 RM (လက်ဆွဲ ၇ ကီလိုစီပါ)
အထက်ပါဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးမှု့တွင် Airasia မှ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းရောင်းချပေးမည်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် - မလေးရှား - ရန်ကုန်
10.6.2013 မှ 30.6.2013 ကြား (ဇွန်လတစ်လလုံး)
ရန်ကုန်-မလေးရှား-ရန်ကုန် အသွားအပြန် - 360.00 MYR ONLY
ရန်ကုန်-ဘန်ကောက်-ရန်ကုန် အသွားအပြန် - 315.00 MYR ONLY
ရန်ကုန်- မလေးရှား-စင်္ကာပူ-ဘန်ကောက်-ရန်ကုန် သွားပြန်လက်မှတ်များလုံးကို
V Link Travels & Tours Co., LTD နှင့် ရွေလုငယ်ဝန်ဆောင်မှု့ အထူးအစီအဖြစ်
တတိယ အထူး အစီအစဉ်
(မြန်မာပြည်တွင်း ကားလက်မှတ်များ မလေးရှားတွင်ဝယ်နိုင်ပြီ)
8း00AM / 5:00PM/ 6:00PM/ 7:00PM/ 8:00PM 60.00 RM
8:00AM/ 6:00PM/ 7:00PM 60.00 RM
7:00AM/ 8:00PM 60.00 RM
9း00AM/ 9:00PM/ 9:30PM 60.00 RM
8း00AM/ 8:00PM 80.00 RM
12:00PM / 2:00PM/ 5:00PM/ 10:00PM 40.00 RM
8း00AM/ 8:00PM/ 9:00PM 45.00 RM
(အထက်ပါ EXPRESS BUS များသည်၊AIR-CON နှင့် ၂ယောက်ထိုင်ခုံများဖြစ်သည်။
(ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ကားလက်မှတ်လဲနိုင်မည်။)
လေဆိပ်မှ အောင်မင်္ဂလာကားဂိတ်သို့ခရီးသည်ကိုယ်တိုင်TAXI ဌါးနိုင်ပါသည်။
TAXI ခမှာ ခန့်မှန်းခြေ ကျပ် 3000 ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ ၄၅ မိနစ်ခန့်မောင်းနှင်ရပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ကားဂိတ်သို့ ကားထွက်ချိန်တွင်အချိန်မှီမရောက်ပါက ကြိုတင်ဝယ်ထားသောလက်မှတ်အဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ အခြားနိုင်ငံများမှ မြန်မာများအနေဖြင့် မလေးရှားတွင် Transit လုပ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းလက်မှတ်ဖြင့် ပျံသန်းမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မလေးရှားသံရုံးများတွင် ဗီဇာလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည် ။ တိုက်ရိုက် Transit မရနိုင်ပါ ။
ရွှေလူငယ်ဝန်ဆောင်မှု့မှ ရောင်းချသည့် လက်မှတ်တိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းများ၏ ငွေပြေစာဖြတ်ပိုင်း နှင့်အတူ Check-In လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည်အထိ ဖြစ်သည်။ ရွှေလူငယ် လက်မှတ်ရောင်းချပေးသူတိုင်းသည် အထက်ပါဈေးနှုန်းများအတိုင်းသာ ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပါသည် ။
0124468842 ရွှေကမ္ဘာစားသောက်ဆိုင်ပေါ် ဒုတိယထပ် ၊
Myanmar - +951 1220394 , 095171204
V LINK TRAVELS & TOURS CO., LTD.
အမှတ် 103 ၊ ပထမထပ် ၊ ရွှေလိပ်ပြာ Apartment Block -1 ၊
အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ရန်ကုန် ။
Office(Yangon) - 1220394
ဦးမင်း - 09450008945
ကိုအောင် - 09420009438
ကိုတူး - 095170410
ကိုလင်း - 095171204
15KG - 35.00 RM
20KG - 40.00 RM
25KG - 50.00 RM
30KG - 70.00 RM
40KG - 120.00 RM
FAQ. (Frequently Ask Questions)
မေး ၁. ကျွန်တော်တို့မတွက်တတ်ဘူး အပေါ်ကရက်စွဲအတိုင်းပြန်မယ်ဗျာ အသွားအပြန် ကီလို 20 စီလဲပါမယ် ဘယ်လောက်လဲ?
ဖြေ . ဟုတ်ကဲ့ အပေါ်က ကျွန်တော်တို့ ရောင်းတဲ့ဈေးမှာ ကီလို 20 ဆို ၄၀ ပေါင်းပေးရင်ပြီးပါပြီ ။ အခြားအပိုတစ်ပြားမှ မပေးရပါဘူး ။
မေး ၂. စိတ်မရှိနဲ့ အဲ့တာတွေအပြင်ဝန်ဆောင်ခပေးရသေးလား ။ ?
ဖြေ . တစ်ပြားမှ ထပ်ပေးဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျာ ။ အသက်အာမခံဝယ်ပါက 10.50 RM ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် ။ မဝယ်ချင်လည်း ရပါတယ် ။
မေး ၃. အဲ့တာလေဆိပ်အထိ ပို့ပေးသလား ?
ဖြေ .မပို့ပေးပါဘူး လေဆိပ်ကိုကားငှားစရာလဲမလိုပါဘူး Airasia လေဆိပ်နဲ့ KL Central ကို 24 နာရီလုံး နာရီဝက်တစ်စီး ပြေးဆွဲပေးနေပြီး ကြိုက်သလောက် လက်ဆွဲအိတ်ပါလာပါစေ 7.00 RM ပဲပေးရပါတယ် ။ သို့သော် မြန်မာ taxi ငှားမည့်သူများရှိပါက ကူညီပေးပါတယ်။
မေး ၄. ပီနန်း ၊ ဂျုဟိုး ၊ စင်္ကာပူ ကလာမယ်ဆိုရင်ရော အကိုတို့လေယာဉ်စီစဉ်ပေးပါသလား ?
ဖြေ . ပီနန်း ၊ ဂျိုဟိုး ၊ စင်္ကာပူ မှ ကွာလာလမ်ပူ Airasia လေဆိပ်သို့ ပရိုမိုးရှင်းဈေး 39.00RM မှ 90.00 အတွင်း နေ့တိုင်း တစ်ရက်9ကြောင်း ပျံသန်းပေးသည် ။ မိမိသွားလိုသောရက်သာပြောပါ ၊ ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးပါသည် ။
မေး ၅. ခုဝယ်မယ့်လက်မှတ်က သွားခါနီးလဲစရာလိုသေးလား ?
ဖြေ . ရွှေလူငယ်တွင်မှာယူသောလက်မှတ်သည် မြန်မာပြည်သာမက Airasia ပျံသန်းသော လေဆိပ်တိုင်းတွင် တိုက်ရိုက် Checking ဝင်ပြီးလေယာဉ်စီးရန်သာဖြစ်သည် မည်သည့် ရုံးများတွင်မှလဲလှယ်ရန်မလိုပါ ။
ထိုမျှမက မလေးရှားမှ ကီလိုမပါပဲပြန်မည့်သူများအတွက် လေယာဉ်ပေါ်တန်းတက်စီးရန် တိုက်ရိုက် Checkin ဝင်ပေးသည်။
မေး ၆. မြန်မာပြည်တွင် ရွှေလူငယ်ဝန်ဆောင်မှု့ရှိပါသလား ?
ဖြေ . ယနေ့မြန်မာပြည်တွင် ရွေလူငယ်ဝန်ဆောင်မှု့အောင်မြင်စွာဖွင့်လစ်လိုက်ပြီ။အထက်တွင်လိပ်စာထည့်ထားပေးပါသည်။ မလေးရှားမှဝယ်ယူထားသူများမြန်မာပြည်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သလို ၊ မြန်မာပြည်မှ ဝယ်ယူထားသူများ မလေးရှားတွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အပိုဝန်ဆောင်ခမယူပါ ။
မေး ၇. ကျွန်တော်တို့ လက်မှတ်ကိုသူဌေး / အေးဂျင်းကဝယ်ပေးထားတာ အဲ့တာ ကီလိုပိုဝယ်လို့ရလား ၊ ပြီးတော့ လေဆိပ်မှာလူအရမ်းများလို့ ကြိုပြီး Checkin ဝင်ချင်တာရောရလား ?
ဖြေ .မည်သူဝယ်ပေးသည့်လက်မှတ်ဖြစ်စေ ရွှေလူငယ်တွင် ကီလိုပိုဝယ်နိုင်ပြီး ။ ခရီးမထွက်ခင် ၂ ပတ် (14) ရက်အလိုမှာ မည်သူမဆို Checkin ဝင်ရန်အတွက် လာရာက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်သည် ။
မေး ၈ . အိုကေဗျာ ကြိုက်ပြီ ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ ?
ဒီလိုဆိုတော့လဲ မလေးရှားကဆို အောက်ကဖုန်းနံပတ်